टिभिएसको जस्तो 'ग्रोथ' अरु ब्रान्डको... :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
विगत ५ वर्षदेखि नेपालमा जगदम्बा मोटर्सले टिभिएसका सवारीसाधन बिक्री गर्दै आएको छ। आक्रामक तरिकाले रिलन्च गरिएको टिभिएसलाई ५ वर्ष भित्र नेपालको नम्बर १ ब्राण्ड बनाउने कम्पनीको दावी थियो।
यो ५ वर्ष भित्र सडकमा टिभिएसको उपस्थिती राम्रो देखिएपनि जगदम्बा मोटर्सको नम्बर १ ब्राण्ड बन्ने लक्ष्य कुन हदसम्म पुरा भयो, अब कस्तो रणनिती अपनाउँदैछ र समग्र अटोमोवाइल उद्योगको अवस्थाको बारेमा हामीले जगदम्बा मोटर्सका उपाध्यक्ष दिपक अग्रवालसगँ कुरा गरेका छौं।
जगदम्बा मोटर्सले टिभिएसको आधिकारिक वितरकको भुमिका निर्वाह गरेको ५ वर्ष भयो। त्यो बेलामा सोच्नु भएको जस्तो गर्नसक्नु भएको छ कि छैन?
त्यो बेलामा ५ वर्षमा नम्बर १ ब्राण्ड बन्ने हाम्रो लक्ष्य थियो। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने हामीले त्यो लक्ष्य चाहीँ पुरा गरेका छैनौ। तर ५ वर्षको हाम्रो ग्रोथ रेट हेर्ने हो भने छिट्टो लोप्रिय हुने ब्राण्ड मध्यमा टिभिएस पनि एक हो।
अरु ब्राण्डको तुलनामा ग्रोथरेट, एक्सपोजर टिभिएसको ग्रोथ छ त्यो सायद अरु ब्राण्डले लिन सकेको छैन। त्यो सन्तुष्टी, आत्मविस्वास भने बढेको छ। हाम्रो यात्रा निरन्तर अघि बढिरहेको छ र हाम्रो ग्रोथसगँ सन्तुष्ट छौ।
आधिकारिक वितरकको जिम्मा जगदम्बा मोटर्सले पाएपछि टिभिएसको सेल्स आकाशिनुको कारण चाहीँ के हो?
टिम राम्रो भएर मात्र हुँदैन र प्रोडक्ट राम्रो मात्रै भएर पनि हुँदैन। हाम्रो टिम वर्क निकै राम्रो छ र हाम्रो प्रोडक्ट, मार्केटिङ स्ट्राटेजी, हाम्रो नेटवर्क, बिक्रि पछिको सेवा, म्यानेज्मेन्टको गाइडेन्स सबै पक्षको कारण हाम्रो ग्रोथ बढेको हो। हामीले सेल्स ग्रो गर्नको लागि ३५ जनाबाट सुरु गरेका थियौ अहिले ४ सय ५० जानको टिम छ।
२६ ओटा नेटवर्क बाट सुरु गरेका थियौ आजको दिनमा १ सय १० ओटा नेटवर्क छ। हाम्रो मूल मन्त्र नै विक्री पछिको सेवामा ध्यान दिने हो, स्पेयर पाट्सको सहजता, नेपाल भरका मेकानिकहरुलाई, कम्पनीले पनि विभिन्न रेन्जको मोटरसाइकल र स्कुटर उपलब्ध गरायो यी सबै कुराले हामीलाई अघि बढायो।
पहिले टिभिएसका स्पेयर पाट्स नपाउने, महंगो हुने भन्ने गुनासो सुनिन्थ्यो, त्यो गुनासो हटाउन कत्तिको सफल हुनुभयो?
हामीले ‘साथ छ हाम्रो’ भन्ने नारा ल्यायौ त्यसको अर्थनै यही हो। हाम्र यो सोच बिक्री, बिक्रीपछिको सेवा, स्पेयर पाट्स, फाइन्यान्स लगायतमा ग्राककलाई जगदम्बा मोटर्सले साथ दिने भन्ने नै हाम्रो रणनिती हो।
यसको लागि हामीले नेपलभर ३ सय भन्दा धेरै सर्भिस सेन्टर स्थापना गर्यो, स्पेयर पाट्सको मूल्यलाई हामीले परिमार्जन गर्यौ, आधिकारिक पाट्सका स्टोरहरु खोल्यौ, सर्टिफाइड स्पेयर पोइन्टहरु स्यापना गर्यौ, लोकल रोडसाइड ग्यारेजका मेकानिकहरुलाई तालिम दियौ, पुराना ग्रहकसगँ सम्पर्क गरेर विभिन्न सर्भिस क्याम्प हरु गरेर ग्राहक र कम्पनी बीच भएको ग्याप हटाउन प्रयत्न गर्यौ।
लकडाउनले गर्दा कत्तीको समस्या पर्यो?
यो संसारभर परेको समस्या हो। अझ अटोमावाइल क्षेत्र त झनै मर्कामा छ। इम्पोर्ट, सेल्स कती छ त्यो त जग जायर नै छ। ३ महिना त हामी सबै बन्दै गरेर बसेका थियौ। लकडाउन खुकुलो भएपछि दुईं पांग्रे सवारीसाधनको बजारमा आशा देखिएको छ।
किनभने अहिले सामाजिक दुरीका कुराहरु छन्, सार्वजनिक यातायात चलेका छैनन्, भोलि चलेको दिनमा पनि कती हदसम्म त्यसमा सहज हुन्छ।
सामाजिक दुरीको लागि सहज माध्यम भनेको दुइपांग्रे सवारी साधननै हो। त्यही पनि हामी विस्वस्त हुन सक्ने अवस्था भने छैन, रेमिट्यान्स घटेको छ, जब कटको कुरा आइरहेका छन् मानिसको प्रायोरिटी परिर्वतन भएको छ।
सेल्स रिकभर गर्न तपाईहरुको प्रयास चाहीँ के के छ?
हामीले अहिले विभिन्न स्किममा काम गरिरहेका छौ। नगदमा किन्ने ग्राहकलाई मोटरसाइकलमा १२ र स्कुटरमा १० हजार छुटको व्यवस्था गरेका छौ।
किस्तामा किन्न चाहानेहरुको लागि फाइन्यान्सको स्किम ल्याएका छौ, यसमा ब्याज नलाग्ने स्किम पनि छ, अहिले डाउन पेमेन्ट गरेर ८ महिनासम्म ९९ रुपैयाँमात्रै किस्ता तिर्ने पाउने स्किम पनि छ, अहिले डाउन पेमेन्ट नै नगरी मोटरसाइकल किन्न पाउने लगायतका स्किम ल्याएका छौ।
सबैले कम्पनीले आफले सकेको स्किम ल्याएका छन्, ग्राहक अलमलमा पर्दैनन्?
स्किम बजारको माग हो। यसलाई अस्वस्थ प्रतिश्पर्धा भन्नु मिल्दैन तर ग्राहक स्किममा फोकस हुनु भन्दा आफ्नो आवश्यकता के छ, कुन रेन्जमा जाने हो, कुन ब्रान्डको किन्ने हो त्यसमा फोकस हुनुपर्छ।
लकडाउन खुकुलो भएपछि टिभिएसको मोटरसाइकल र स्कुटरको सेल्स, बुकिङ र इन्कवायरी कस्तो छ?
लकडाउन पछि टिभिएसको मोटरसाइकल र स्कुटरको सेल्स, बुकिङ र इन्कवायरी देशै भर राम्रै छ। हामीले ५०/६० प्रतिशत ग्रोथ गर्यौ जस्तो लाग्छ।
३ महिना त व्यापार डामाडोलनै भयो, त्यो रिकभर हुन कती समय लाग्ला?
यो ग्रोथ कहीलेसम्म सस्टेन हुन्छ हामीलाई थाहा छैन। ३ महिना सेल्स ब्लक भएको थियो र दुइपांग्रे सवारी साधनको आवस्यकता देखिएकोले सेल्स बढेको हो। यो सेल्स कहिलेसम्म रहन्छ त्यो प्रस्ट छैन। यो वर्ष त पक्कै पनि रिकभर हुँदैन।
जगदम्बा मोटर्सको अबको योजना चाहीँ के छ?
हामी अहिले अनलाइनमा फोकस भइरहेका छौ। हामीले अहिले पनि इसेवा, खल्ती आइपिएसबाट डाउनपेमेन्ट गरेर अनलाइन बुकिङ गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएका छौ र हाम्रा प्रतिनिधीले होम डेलिभरी नै गरिदिनुहुन्छ।
आउने दिनहरुमा अझ शसक्त रुपमा जान भर्चुअल शोरुमको कन्सेप्ट बनाउँदै छौ। जसले गर्दा तपाई आफ्नो मोवाइलबाट शोरुम र चाहेको प्रोडक्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, भिडियो कल गरेर सेल्स म्यान सगँकुरा गर्न सक्नुहुन्छ।
डकुमेन्ट, इएमआई लगायतका शोरुममा बुझ्नपर्नेकुरा घरैमा बसेर सबै जानकारी पाउन सकिन्छ। घरमै बसेर घर अगाडि मोटरसाइकल पुर्याउने जिम्मा हाम्रो हुनेछ।
दुइपांग्रे सवारीसाधन किन्न चाहनेलाई केही भन्न चाहानुहुन्छ?
संसारको ६५ ओटा भन्दा धेरै देशमा टिभिएस एक्सपर्ट हुन्छ। म आफैं पनि फ्याक्ट्री भिजिट गरेर हेर्दा के पाए भने उनीहरुले शुक्ष्म भन्दा शुक्ष्म कुरालाई पनि निकै ध्यान दिएर बनाएका छन्। आजसम्म जति पनि प्रोडक्ट आएका छन् त्यमा टेक्निकल फेलियर नगन्य छ।
गुणस्तरको हिसावले केही ब्राण्डका मोटरसाइकल थोरै समयमा इन्जिन खोल्नुपर्ने लगायतको समस्या आउँछन् भने टिभिएसमा त्यो अवस्था छैन। स्पेयर पाट्स उत्तिकै रिजनेवल र गुणस्तरको छ। गुणस्तरिय उत्पादनसगँ एसोसिएट हुन चाहानुहुन्छ भने टिभिएस राम्रो विकल्प हो।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार २४, २०७७, ०८:५८:००